Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Axad Ah 29 May
HomeWararka CiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Axad Ah 29 May
May 29, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay dalab ka gudbiso 31 sanno jirka qadka dhexe ee Chelsea iyo France N’Golo Kante. (The guardian)
Liverpool ayaa xiriir la samaysay 25 jirka garabka uga ciyaara France ee Ousmane Dembele kaas oo heshiiskiisa Barcelona dhacayo xagaagan. (Sport – Isbaanish)
Manchester United ayaa diyaar u ah inay ka dhigto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, ciyaaryahanka ugu mushaarka badan isagoo qaata 395,000 oo ginni. (STAR)
Tababaraha Manchester United Erik ten Hag ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo 20 jirka daafaca uga ciyaara Ajax Jurrien Timber iyo 22 jirka weerarka uga ciyaara Benfica Darwin Nunez. (Mirror)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa wadahadalo la yeelan doona Conor Gallagher, oo 22 jir ah, ka hor inta uusan go’aansan mustaqbalkiisa. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England ayaa xilli ciyaareedkii hore amaah ku joogay Crystal Palace . ( Fabrizio Romano)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan, oo 31 jir ah, ayaa lagu wadaa inuu kala hadlo mustaqbalkiisa kooxda. ( 90min)
Tababaraha cusub ee Burnley Vincent Kompany ayaa doonaya inuu ka dhigo daafaca dhexe ee Ingariiska Taylor Harwood-Bellis, oo 20 jir ah, saxiixii ugu horeeyay ee uu amaah kaga soo qaato kooxdiisii ​​hore ee Manchester City . ( Sun)
Weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani, oo 35 jir ah, ayaa sheegay in uu dhadhan qadhaadh uga tagay warqad furan oo uu u diray Manchester United ka dib markii uu ka tagay. ( Daily star)
Garabka Inter Milan iyo Croatia Ivan Perisic, oo 33 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu si xor ah ugu biiro Tottenham , waxaana laga yaabaa in heshiiska lagu dhawaaqo toddobaadka soo socda. ( Fabrizio Romano)
Tababaraha kooxda Roma Jose Mourinho ayaa rajeynaya inuu ku garaaco kooxdiisii ​​hore ee Tottenham iyo Manchester United saxiixa weeraryahanka Argentina Paulo Dybala, oo 28 jir ah, ka dib markii uu ka tagay Juventus xagaagan. ( Express)
Paris St-Germain ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato weeraryahanka reer Brazil Richarlison, oo 25 jir ah, kaasoo ka imaanaya Everton xagaagan. ( Fichajes – Isbaanish)
Aabaha dhalay garabka Leeds Raphinha ayaa yiri “suurtogal ayaa jira” mustaqbalkiisa iyadoo 25 jirka reer Brazil weli lala xiriirinayo Barcelona . ( Express)
Juventus ayaa u soo bandhigtay garabka Argentina Angel di Maria, oo 34 jir ah, qandaraas hal sano ah ka dib markii uu go’aansaday inuu ka tago Paris St-Germain dhamaadka xilli ciyaareedkan. ( Calciomercato – af Talyaani)
Daafaca Manchester City ee reer Japan Ko Itakura, oo 25 jir ah, ayaa xiiso ka helaya Bournemouth iyo Fulham ka dib markii amaah cajiib ah uu ugu soo biiray Schalke . ( Sky Sports)